Ungamisa kanjani i-Omicron manje? Inketho Eyodwa Kuphela Esele!
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Impilo » Ungamisa kanjani i-Omicron manje? Inketho Eyodwa Kuphela Esele!
Isithombe sihlonishwa ngu-Gerd Altmann wase-Pixabay
Imibiko yakamuva ichaza ukuvikeleka okwehliswe kakhulu ekutheleleni kabusha kanye nokusebenza komuthi wokugoma cishe ongekho esifweni esiyizimpawu ngemva kokugonywa kabili kwe-Pfizer.
Kepha abantu abathole ama-Pfizer booster babevikelekile “ebangeni lama-75%,
I-Omicron ibhebhetheka njengomlilo wequbula hhayi e-United States naseYurophu kuphela. Ochwepheshe baxwayisa ngokuvalwa okuphelele kwengqalasizinda ebalulekile, kanye nenkinga engakaze ibonwe ngenxa yokusabalala okungalawuleki kokuhluka kwe-Omicron, okwaziwa nangokuthi B.1.1.529.
Iqiniso lisanda kuvezwa:
Ucwaningo lusanda kuphothulwa ngoDisemba 31 futhi lwashicilelwa nature.com ithi:
I-Omicron (B.1.1.529) ehlukile ye-acute acute kupumua syndrome 2 (SARS-CoV-2) yaqala ukuhlonzwa ngoNovemba ka-2021 eNingizimu Afrika naseBotswana kanye nesampula yesihambi esivela eNingizimu Afrika eHong. I-Kong.
Kusukela lapho, i-B.1.1.529 itholakele emhlabeni jikelele.
Lokhu okuhlukile kubonakala kuthathelanayo okungenani ngokulinganayo kune-B.1.617.2 (Delta), sekuvele kubangele izehlakalo ze-super spreader, futhi kudlule i-Delta phakathi namaviki ambalwa emazweni nasezindaweni zasemadolobheni amakhulu.
I-B.1.1.529 isingatha inani elingakaze libonwe lokuguqulwa kofuzo lwayo lwe-spike futhi imibiko yangaphambi kwesikhathi inikeze ubufakazi bokuphunyuka okubanzi kwamasosha omzimba kanye nokusebenza okuncishisiwe kokugoma.
Lapha, siphenye umsebenzi wokuqeda amandla nokubophezela we-sera kusukela ku-convalescent, i-mRNA egonywe kabili, i-mRNA ekhulisiwe, i-convalescent egonywe kabili, kanye ne-convalescent eyandisa abantu ngokumelene nohlobo lwasendle, i-B.1.351 kanye ne-B.1.1.529 i-SARS-CoV-2 isolate.
Umsebenzi wokungathathi hlangothi we-sera osuka kubahlanganyeli be-convalescent kanye nabagonywe kabili awuzange ubonakale uphansi kakhulu uma uqhathaniswa ne-B.1.1.529 ngenkathi umsebenzi wokwenza isera ungasebenzi ovela kubantu ababechayeke ku-spike izikhathi ezintathu noma ezine uye wagcinwa, nakuba kwakungamazinga anciphe kakhulu.
Ukubophezela kusizinda se-B.1.1.529 se-receptor-binding (RBD) kanye nesizinda se-N-terminal (NTD) kwehliswe nge-convalescent yabantu abangagonyiwe kodwa ngokuvamile kugcinwa kubantu abagonyiwe.
Lo mbhalo wesandla ubuyekezwe ontanga futhi wamukelwa ukuthi ushicilelwe kuMvelo futhi unikezwe ngale fomethi lapha njengempendulo yenkinga yezempilo yomphakathi engavamile. Lo mbhalo wesandla owamukelwe uzoqhubeka ngezinqubo zokuhlela nokufometha kuze kushicilelwe inguqulo ephothuliwe yerekhodi ku-nature.com.
Sicela uqaphele ukuthi kungase kube namaphutha akhona kule nguqulo, angase athinte okuqukethwe, futhi yonke imishwana yokuqhathula esemthethweni iyasebenza.
Ngokombhalo osanda kukhishwa owashicilelwa okokuqala ku-CNN International uDkt. Peter English, uchwepheshe wokulawulwa kwezifo ezithathelanayo e-UK, esitatimendeni.
Umthamo wesithathu womgomo uthuthukisa kakhulu ukusabela kwamasosha omzimba ngokumelene nokutheleleka nge-Omicron.
Ngokusho kwe-CNN, uDkt Julian Tang waseYunivesithi yaseLeicester, naye owayengahileleki kulolu cwaningo, uphinde wathi izimpendulo ze-T-cell zibalulekile ekuvikelweni kwesikhathi eside ezifweni ezinzima.
“Okubalulekile ukuthi ukuqinisa amasosha omzimba akhona (noma ngabe umuthi wokugoma noma otholwe ngokwemvelo) kuyasiza ukuvikela ekuthelelekeni/ukutheleleka ngezinga elithile - kanye nokuthuthukisa izimpendulo ezikhona ze-T-cell - konke okuzosiza ukusivikela ku-Omicron. Ngakho ukuthola le mithamo ye-booster kubalulekile - ikakhulukazi uma ukwelinye lamaqembu asengozini kakhulu," kusho uTang
Africa Botswana CNN Iningizimu Afrika I-united states
I-US DOT ne-FAA icela i-AT&T ne-Verizon ukuthi ibambezele ukukhishwa kwesevisi entsha ye-5G
I-Times Square yase-Asia: I-Thailand emangalisayo ikhala ngo-2022